Google နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဒီအချက်တွေကို သိပြီးပြီလား? -
Google ဆိုတာဘာလဲ? သိတော့သိတယ်အတွင်းကျကျတော့ သိပ်မသိဘူးဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီအကြောင်းအရာကို ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်…
Google လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ လူတိုင်းနီးပါးကတော့ ကိုယ်မသိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အင်တာနက်ရှိရင် ရှာလို့ရတဲ့ အရာလို့ သိထားကြပါတယ်။ နည်းနည်းပိုသိတဲ့သူတွေကတော့ Google က Search Engine တစ်ခုဆိုပြီး သိကြပါတယ်။ Messenger တို့ Viber တို့တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးမပြုခင်အချိန်တုန်းက အမှတ်ရစရာ အဖြစ်အပျက်အချို့ကို Google ရဲ့ Service တစ်ခုဖြစ်တဲ့ G-talk မှာကြုံဖူးခဲ့ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီ G-talk ဆိုတာ Google ကပိုင်တဲ့ Service တွေကတစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့မှာ Google က Shut Down လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ G-talk နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Contact တွေကိုတော့ Hangout ဆိုတဲ့ Chrome Extension မှာသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပြောရင်းနဲ့ G-talk ဘက်ရောက်သွားတဲ့အတွက် ဆိုလိုရင်း အကြောင်းအရာဘက်ကို ပြန်သွားပါမယ်။
ဒီတော့ သတိမထားမိတဲ့ Google နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့… Google က ကိုယ်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရှာဖွေလို့ရတဲ့ Search Engine တစ်ခုသာမက သူ့မှာ Product နဲ့ Service တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ Online Ads အများအပြားကိုလည်း Google စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Google ရဲ့ Product တွေကတော့ လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ အသုံးပြုနေကြတဲ့ Gmail, Google Drive, Google Photo, Google Map, Google Calendar နဲ့ အခြား Product တွေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် Google ရဲ့ Product တစ်ခုကတော့ Second Largest Search Engine ဖြစ်တဲ့ YouTube ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ YouTube ကိုတော့ Google က ၂၀၀၆ နိုဝင်ဘာလမှာ ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။
Google ရဲ့ Service တွေကတော့ Website Developer တွေ Publisher တွေအတွက် အားကိုးစရာ Tool တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Google Analytics, Google Webmaster Tool တို့ပါဝင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် Google User တွေအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမယ့် Google Service တွေကတော့ Google Video, Google News, Google Flight, Google Shopping နဲ့ အခြားသော Service တွေဖြစ်ပါတယ်။ Facebook နဲ့ သဏ္ဍာန်တူတဲ့ Google ရဲ့ Service တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Google+ ကတော့ ၂၀၁၉ ဧပရယ် ၂ ရက်နေ့မှာ Shut Down လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကတော့ Google နဲ့ပတ်သတ် သာမန် User တွေသတိမထားမိတဲ့ အချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်နဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြတဲ့ သူတွေအနေနဲ့က Gmail, Google Drive တို့က သိထားပြီးလောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအချက်တွေကို ဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် မိတ်ဆွေတို့သိထားတဲ့ Google ရဲ့ လူသတိမထားမိတဲ့ အချက်တွေရှိခဲ့ရင်လည်း ပြန်လည်ဝေမျှခဲ့လို့ရပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Monday March 8th, 2021/ Blog/0Comment